ဘာလာလာ ဖုံးမယ်ဟေ့ :D :D ! | CosmeticMyanmar
Home » Article » ဘာလာလာ ဖုံးမယ်ဟေ့ :D :D !
ဘယ်လိုအသားအရေမဆို ပေါ်ပေါက်လာတတ်တဲ့ အပြစ်အနာအဆာတွေကို ဖုံးအုပ်ဖို့ရန်အတွက် Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer လေးလာပါပြီ။ ဒီ Concealer ဟာ မျက်ဝန်းတဝိုက်ပေါ်ပေါက်လာတတ်တဲ့ အညိုအမည်းများကို ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ရုံသာမက ထွက်ပေါ်လာတတ်တဲ့ ဝက်ခြံလေးတွေပါ အလွယ်တကူ ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တဲ့ အရေးအကြောင်းတွေကိုလည်း ဖုံးအုပ်ပေးနိုင်လို့ Perfect ပဲပေါ့။ လိမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာ မျက်နှာနဲ့ Concealer ဟာ တသားတည်းကျတဲ့အတွက်ကြောင့် ထူထည်းပြီး သီးခြားဖြစ်နေတာမျိုး မဖြစ်တော့ပါဘူး။ Skin Fusion Technology ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့် 12 နာရီကြာ ဖုံးအုပ်ပေးထားနိုင်ပြီး ချွေးကြောင့်ဖြစ်စေ၊ စိုထိုင်းမှုကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ရေကြောင့်ဖြစ်စေ ပျောက်ပျက်သွားမှာလည်း မစိုးရိမ်ရတော့ဘူးပေါ့။
Oil Free ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် အဆီပြန်တဲ့အသားအရေပိုင်ရှင်တွေလည်း စိတ်ချစွာ အသုံးပြုလို့ရပြီနော်။ အသားအရောင် ဖြူသူမှ ညိုသူအထိ ရွေးချယ်လို့ရအောင် Shades အားဖြင့် 12 ရောင်ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ အသုံးပြုတဲ့အခါ ဗူးမှာပါဝင်တဲ့ Dot Applicator လေးနဲ့ အသုံးပြုလိုတဲ့နေရာတွေမှာ အစက်ချပြီး လက်ချောင်းထိပ်လေးတွေအသုံးပြုကာ အသာအယာ လိမ်းခြယ်ရုံပါပဲ။ မျက်ကွင်း အရမ်းညိုလို့ Brightening Powder လေးကို ထပ်လောင်းအသုံးပြုရင်လည်း အရမ်းကို အဆင်ပြေမှာပါ။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ မျက်ဝန်းတဝိုက်အသုံးပြုရန်အတွက် နည်းလမ်းတွေကိုလည်း အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင် Video ကတဆင့် ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်နော်။ လက်တွေ့အသုံးပြုပုံတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့် အသုံးဝင်ပြီး ကြိုက်နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်နော်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် ၂၈ ဒေါ်လာရှိပြီး User တော်တော်များများနှစ်ခြိုက်တဲ့ Product လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။